२४५५.८१ विन्दुमा नेप्से,२ अर्ब ६६ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री | आर्थिक अभियान
मंसिर २२, काठमाडौं । साताको चौथो कारोबार दिन बुधवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ५३ दशमलव १० अंक अर्थात् २ दशमलव २१२ प्रतिशत घटेको छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचक २ हजार ४५५ दशमलव ८१ विन्दुमा झरेको हो । यो दिन कारोबारमा आएका २२६ ओटा धितोपत्रको ६५ लाख ६० हजार ९४७ कित्ता शेयरको ४२ हजार ९४६ पटकमा रू. २ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख ९ हजार ६१९ दशमलव ७४ बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कारोबारमा आएका १३ ओटै समूहको परिसूचक घटेसँगै समग्र नेप्से परिसूचक घटेको हो । १३ ओटा समूहमध्ये सबैभन्दा बढी ब्यापार समूहको परिसूचक ३ दशमलव ७३ प्रतिशत घटेको छ ।
त्यस्तै बैकिङ समूहको परिसूचक १ दशमलव ५३ प्रतिशत,होटल एण्ड टुरिजम समूहको परिसूचक २ दशमलव ५ प्रतिशत,विकास बैंक समूहको ३ दशमलव ३१ प्रतिशत,हाइड्रोपावर समूहको ३ दशमलव १२ प्रतिशत,वित्त समूहको ३ दशमलव ३ प्रतिशत,निर्जीवन बीमा समूहको २ दशमलव १२ प्रतिशत,उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको २ दशमलव ९१ प्रतिशतले घटेको छ ।
त्यसैगरी अन्य समूहको १ दशमलव १५ प्रतिशत,लघुवित्त समूहको २ दशमलव ५९ प्रतिशत,जीबन बीमा समूहको २ दशमलव १९ प्रतिशत,म्युचुअल फण्ड समूहको शून्य दशलमव ७५ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक २ दशमलव ४८ प्रतिशत घटेको हो ।
त्यसैगरी बुधवार सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. ११ करोड ८८ लाख १५ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.३८२ कायम भएको छ ।
त्यसैगरी दोस्रोमा नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको रू.१० करोड ९१ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । त्यस्तै यो दिन सबैभन्दा बढी सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले गुमाएका छन् ।
कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ८ दशमलव ५४ प्रतिशत घटेको हो । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू.१ हजार १६८ मा झरेको छ । कम्पनीले गत आवको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई कुनै पनि लाभांश नदिने निर्णय गरेसँगै विक्रेता हावी हुँदा शेयरमूल्य घटेको छ ।
दोस्रोमा एक्सेल डेभलपमेण्ट कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ८ दशमलव ३० प्रतिशत घटेर रू. ५५० दशमलव २० मा झरेको छ । त्यसैगरी सबैभन्दा बढी स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा यो दिन १ दशमलव ९४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ४५० दशमलव ८० कायम भएको हो ।
पछिल्लो समय लगानीकर्ताले दिर्घकालिन लगानीभन्दा पनि अल्पकालिन लगानी गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । ३ हजार २०० विन्दुमा पुगेको शेयर बजार अहिले २ हजार ४५५ विन्दुमा आएको छ ।